Fiovan’ny Haino Aman-jery Sosialy Any Trinidad sy Tobago Manasongadina Ny Fahasarotan’ny Herisetra An-Tokantrano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2016 2:58 GMT
Zatovolahy avy amin'ny sekoly ambaratonga faharoan'i Chaguanas any Trinidad & Tobago mandray anjara amin'ny diabe 2008 manohitra ny Herisetra an-tokatrano ho fahatsiarovana ny Andro Iraisam-pierenena Ho Fanafoanana ny Herisetra Mihatra amin'ny Vehivavy. Sary avy amin'ny CWGL, (CC BY-NC-ND 2.0).
Tamin'ny Febroary 2016, Rachael Sukhde, mpampiasa Facebook nandefa andiana sary tifi-tena (selfies). Notorotoroina sy nivonto ny masony iray, mangana ny ilany iray amin'ny tratrany ary feno voadidy sy kiakiaka ny vatany. Niteraka sahotaka avy hatrany tamin'ny haino aman-jery sosialy ireo sary, izay niaraka tamin'ny sata vaovao nilaza fa niharan'ny herisetra an-tokatrano izy — indrindra indrindra satria izy dia tsy nivaky loha fa nandefa ny zavatra rehetra tao amin'ny pejy Facebook ny asan'ny vadiny. Nesorina tao ny lahatsoratra nony ela.
Tamin'izany fotoana izany, nahazo onjam-panohanana tety anaty serasera i Sukhdeo, miaraka amin'ny fideràna ny herim-pony sy fankaherezana nomen'ireo vehivavy azy amin'ny maha-Fanilo ho an'ny hafa. Nizara ny tantarany ireo hafa niharan'ny herisetra an-tokantrano mitovy aminy izay no sady nanome toky azy fa nety ny nataony niala tao..
Niteraka adihevitra goavana nasionaly mikasika ny herisetra atao amin'ny vehivavy tany Trinidad sy Tobago ny zava-nitranga ary — na dia feno fankasitrahana ilay polisy vavy nikarakara ny raharahany aza i Sukhdeo — mikasika ny fomba izay voalaza fa nikirakiran'ny polisy ny tatitra momba ny fanararaotana an-tokantrano.
Noho izany, diso fanantenana ny tontolon'ny bilaogy – na koa azo lazaina ho taitra – raha tamin'ny alatsinainy 10 oktobra 2016, nilaza tamin'ny fitsarana i Sukhdeo fa tsy te-hanohy intsony ireo vesatra niampangany ny vadiny..
Navalona ilay raharaha, fa tsy namela an'i Sukhdeo handry fehizay toy izany mora foana ny haino aman-jery sosialy. Maro amin'ireo mpiserasera no tsy mety mampifandray ilay tebitebiny voalohany fony izy niteny hoe “te-handrisika Ny REHETRA ao anaty fiarahana misy fanararaotana aho mba hangataka amin'Andriamanitra ny hery sy ny fahasahiana hiala”, sy ny fanapahankeviny hihavana amin'ny vadiny.
Mbola nazavainy tao amin'ny Facebook indray. Rehefa namoaka ireo sary izy tany amin'ny volana febroary tany, nilaza izy fa “kivy tanteraka, maratra, ketraka sy rava” izy, vonona ny hiala amin'ny mahazo azy na inona na inona ho vokany. Novaliany ireo fanakianana izay nanolo-kevitra fa ny zavatra rehetra dia dokambarotra fotsiny ihany, na niverina tany amin'ny vadiny izy mba hiverina hahazo indray ireo fiainany lafo vidy. Noho ny torohevitra, hoy izy, dia nisy fiovana tsara tao amin'ny fitondrantenany.
Raha nanohana ny fanapahankeviny amin'ny fitazonana ny fianakaviany mba ho iray ny sasany amin'ireo mpanaraka azy, ny sasany kosa tsy mba nahatsapa nalahelo. Mpikatroka iray mafana fo ho an'ny zon'ny vehivavy, Diana Mahabir-Wyatt, nampitandrina fa raha tena miova ny lehilahy sasany, amin'ny toe-javatra maromaro, ny herisetra an-tokatrano dia miseho amin'ny endriny hafa — ary ny fiovam-pitondrantena izay hitan'i Sukhdeo dia mety ho dingan'ny volantantely fotsiny ihany.
Ao anaty lahatsoratra bilaogy lahatsoratra bilaogy iray natao antsipirihany, mitaraina ny mpikatroka mafana fo, Brendon O'Brienny, amin'ny tsy fahampian'ny fahalalana ny zava-misy marina momba ny herisetra an-tokantrano. Na dia azony aza ny fahasorenan'ny olona momba ny fanapahankevitr'i Sukhdeo, hoy izy::
Raha ny fanapahankeviny hiverina amin'io fifandraisana io […] dia tsy misy ifandraisany amin'ny fahakingan-tsaina. […] Vehivavy marani-tsaina tokoa i Rachael, tena mahay satria nampiasa ny pejin'ny asan'i Sheron mba hisintonana ny fijery amin'ny zava-tsarotra manjo azy ary mametraka ny tenany ho ivon'ny fisainana nasionaly farafaharatsiny. Tsy dondrona ny karazan'olona toy izany. Nefa olombelona izy. Midika izany fa mety ho voafitaky ny fitiavana ary matahotra ny sazy izy, tahaka ny olombelona rehetra.
Notohizany tamin'ny resaka momba ny soritraretin'ny olona voadaroka, ny filàna fitiavana fa tsy esoeso, na koa ny tsy fahampian'ny finoana izay ananan'ny olona amin'ny rafitry ny fitsarana. .
Tao amin'ny lahatsoratra nivoaka vao haingana tao amin'ny gazetiboky Time, Sherna Alexander Benjamin mpisolovava ny zon'ny vehivavy nanao antso ho an'ny haino aman-jery ao an-toerana mba tsy hanao ny herisetra ho zava-manaitaitra fotsiny ary tsy hampiraika ny olona amin'ny vokany. Nitanisa antontan'isa mampanahy i Benjamin::
Araka ny filazan'i Margaret Sampson Brown, mpitarika ny Sampana Mpanohana ireo Niharam-boina sy Vavolombeloa ao amin'ny Sampandraharahan'ny Polisy any Trinidad sy Tobago, “teo anelanelan'ny taona 2005 sy 2015, teo amin'ny vehivavy 300 no maty vokatry ny herisetra an-tokantrano.’ Eo amin'ny salan'isan'ny vehivavy 30 isan-taona eo ho eo. Vehivavy 30 izany aza efa betsaka, tena betsaka loatra […] eny an-kianja, minoa fa manamaivana ny tena halehiben'ity heloka bevava ity io tarehimarika io.
Teo anelanelan'ny taona 2009 sy 2010, ohatra, maherin'ny 12.000 ireo tranga vaovaonà herisetra an-tokantrano no voarakitra any amin'ny fitsarana.
Misongadina manerana ny faritra ihany koa io olana io. Tamin'ny lahateny izay nataon'ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana, Ban Ki Moon, tany Barbados tamin'ny volana Jolay 2015, dia nomarihany fa “Any Karaiba no manana taha ambony indrindra amin'ny herisetran'ny firaisana ara-nofo eto amin'izao tontolo izao”ary koa “Firenena telo ao Karaiba no ao anatin'ireo folo voalohany maneran-tany amin'ny resaka fanolanana”. “.
Apetraho izany ho ao anatin'ny tontolo misy rafitra iray izay tsy ampy fitaovana hiatrehana ilay olana, hanomboka ho azonao ny zava-tsarotra iainan'ireo vehivavy miaina isanandro ny horohoron'ny herisetra an-tokantrano any Trinidad sy Tobago. Nanazava i Benjamin: :
Misy banga lehibe ny rafitra fanohanana ho an'ny vehivavy sy ny ankizy. Ary ny tsy fisian'ny fikarohana sy ny tahirinkevitra mitsipotipotika no mahatonga azy ho sarotra ho an'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, sy ny sampan-draharahan'ny fitondram-panjakana sy ireo andrim-panjakana akademika, mba hampisy dikany ilay fanamby misy ankehitriny.
Saingy misy vahaolana azo raisina. Manolotra hkevitra i Benjamin; ambonin'ny zavatra rehetra, fa mila mivoatra ny rafi-pialofana; ary “tokony hametraka mpisolovava hisahana ny herisetra mifandray amin'ny miralenta manerana ny hopitaly lehibe rehetra ao amin'ny firenena sy eraky ny tobin'ny polisy ny governemanta”; ary tokony ho afaka hanana anjara toerana amin'ny fanomezana ‘diplaoma na taratasy fanamarinana taranja manokana amin'ny ady amin'ny herisetra mifandray amin'ny miralenta ny anjerimanontolo”.
Tena zava-dehibe hoy izy:”Amin'ny maha-fiarahamonina iray manontolo, dia ilaintsika ny manao asa tsara kokoa ho fanohanana ireo niharam-boina. Mila ahilika ny fenitra ara-kolontsaina amin'izay mba tsy voatsiny vokatry ny herisetra nanjo azy ireo niharam-boina, ary mba tsy hiharan'ny tsy rariny ataon'ny vahoaka tsy miraharaha izy ireo.”
Na, araka ny nametrahan‘i Brendon O'Brien azy, amin'ny raharahan'i Rahael Sukhdeo:
Araka izany, tsy manana zo t**y hanala baraka azy isika noho ny nitetezany rafitra efa mirodana mba hiarovany ny tenany sy ny zanany. Mazava ho azy, afaka miteny isika hoe tsy izany no lafatra indrindra, nefa tokony hilaza ny marina isika amin'ny hoe tsy misy toerana lafatra hoazy eto. Avy eo isika mila t**y manorina izay toerana azo antoka izay ho an'ireo olona toa azy, fa tsy hanakiakiana azy noho ny tsy nahavitàny manorina izany.
7 ora izayJamaika
14 ora izayJamaika